‘बेसार पानीको भर नपरेर अलि चाँडो अस्पताल ल्याएको भए बुवा बाँच्नुहुन्थ्यो कि!’ – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/‘बेसार पानीको भर नपरेर अलि चाँडो अस्पताल ल्याएको भए बुवा बाँच्नुहुन्थ्यो कि!’
गत साउन अन्तिम साता बुवामा कोरोना देखिए पनि केही दिन घरमै राख्यौं। हामीलाई सल्लाह दिनेहरूले बेसार पानी, तातोपानी खाँदा निको हुन्छ भनिदिए। त्यसैले बुवालाई अस्पताल ल्याउन पनि केही दिन ढिला भयो। कोरोना देखिनेबित्तिकै उहाँलाई मैले अस्पताल किन ल्याइनँ होला? बचाउन सकिन्थ्यो कि! अहिले मलाई यो कुराले निकै पीडा भइरहेको छ।